Maamulka Gobolka Shabelaha Dhexe oo sheegey iney Alshabab kala wareegi doonan Deeganka oo dhan | Daafeet	Friday, October 21st, 2016	Home
Maamulka Gobolka Shabelaha Dhexe oo sheegey iney Alshabab kala wareegi doonan Deeganka oo dhan
Feb 19, 2013 - Aragtiyood	Cali Cismaan Ibraahin Guddoomiye ku xigeenka dhanka maaliyada ee Gobalka Shabeelaha dhexe oo la hadlay warbaahin ayaa wuxuu sheegay in maalmaha soo socda ay la wareegayaan deeganada aysan iminka joogintop ten best online casinos.
Wuxuu sheegay howlgalkii shalay lagula wareegay Garoonka Degmada Jowhar uusan noqon doonin mid istaaga uuna sii socon doono ilaa guud ahaan Gobalka Shabeelaha dhexe laga saarayo Al-Shabaabtop casino sites uk.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka maaliyada ee Gobalka Shabeelaha dhexe Cali Cismaan Ibraahin ayaa sidoo kale sheegay in shacabka Gobalka looga baahan yahay taageerada Dowladda Soomaliyatop 10 bonus casinos.
three card poker games onlineCiidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa shalay la wareegay gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee Degmada Jowhar halkaasi oo ay Shabaab maamuli jireen.
Fadlan Riix hoose hadaad tahay ilbaxonline keno	online keno boardonline gambling comWARARKII KU DHAAFAY	Shariif Xasan oo ku Dhiiran Waayey Inuu ku Dhawaaqo inuu Yahay Mushax Madaxweyne